China Backpack Backpack Camping Trekking Bag ho an'ny vehivavy mihanika amin'ny dia an-tongotra Hacks Racksack Fishing Cycle Backpack fanamboarana sy orinasa | New Hunter
Kitapo fitsangatsanganana an-kalamanjana any ivelany ho an'ny lehilahy ho an'ny vehivavy miakatra an-tongotra Hacks Racksack Fanjonoana kitapom-batsy
Item NO .:HT63062
Fitaovana: Polyester oxford
Habe: 65.0 x 38.0 x 24.0 cm / 25.6 x 14.96 x 9.45 santimetatra
Loko:Maitso, manga, mainty, mena
Vidin'ny FOB XIAMEN: $ 17.5-20.5
Daypack mampahazo aina:
* Ity kitapom-batsy miakatra ity dia natao manokana ho an'ireo mpankafy mpandehandeha, fehin-tànana miendrika ergonomika sy soroka miverina, manome anao fahatsapana mahazo aina kokoa.
* Ny fehin-tsoroka moka azo velomina miaraka amina padding spaonjy be dia be dia be manampy amin'ny fanalefahana ny fihenjanana avy amin'ny soroka. Fehikibo sy soroka matevina miendrika S ary manohana ny lamosina avo lenta ho an'ny rivotra tsara sy manamaivana ny enta-mavesatra.
* Ity fonosana ity dia tsy manana fefy anatiny na ivelany.
* Vita amin'ny fitaovana avo lenta sy azo antoka, mateza amin'ny fampiasana maharitra. Azo antoka fa handray anjara amin'ny traikefa nahafinaritra nataonao teny ivelany.
FAHASALAMANA MAHAY SY FAMPITANDREMANA MULTI:
* Efitra lehibe malalaka sy paosy marobe misy fahaiza-manao lehibe.Sary famolavolana fehikibo fanidiana paosy manokana, fanidiana mafy hisorohana ny entana latsaka avy any anaty kitapo.
* Miaraka amina paosy anatiny iray ho an'ny tatavia rano. Nisaraka ny kitapo ny kitapo, misoroka ny entana ao anaty kitapo ho maloto, mety ary azo ampiharina. Paosy roa lafiny hitondra tavoahangy rano bebe kokoa, ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny ankamaroan'ny zotram-piaramanidina, efitrano ampy ho an'ny 3 na Dia 4 andro.
Miaraka amin'ny 8 Strap ADJUSTABLE:
* Ho an'ny famatorana ny fonosanao na ny kitapom-pandrianao mihantona, tsihy, fandriana amam-borona, tripod ary fitaovana hafa, mety amin'ny fitsangantsanganana, fiakarana, mpankafy fitobiana.
* Kitapo maivana ho an'ny ety ivelany, Ultralight, 2,1 pounds fotsiny ho an'ny fahaizan'ny 60L lehibe, mampihena ny lanjan'ny enta-mavesatra hahafahanao mitondra entana hafa.
* Ny kitapom-batsy misy fahaiza-manao lehibe sy tanjaka mandatsa-dranomaso dia matetika ampiasain'ny mpihanika, amin'ny fitondrana enta-mavesatra na karazana fitaovana rehetra.
* Indraindray izy ireo dia ampiasaina ho valizy, indrindra fa kitapo entina mandeha. Na ho an'ny fanatanjahantena an-kalamanjana, fitsangantsanganana an-tongotra, fitsangantsanganana, fitsangatsanganana, tendrombohitra an-tendrombohitra, mitaingina ect.
Teo aloha: Kitapo mitaingina kitapo 50L & 60L any an-tokotany vaovao mitaingina kitapo tantera-drano mitaingina kitapo fihazana kitapo fanatanjahan-tena miakatra am-pandehanana
Manaraka: Rucksack lamaody lehilahy vehivavy fanatanjahan-tena kitapo fitsangantsanganana kitapo kitapo kitapo; Moutaineering Travel Climbing DaypackBag ho an'ny vehivavy sy lehilahy
New 50L & 60L any an-tokotany kitapom-batsy Cli ...
Kitapo fanatanjahan-tena any ivelany 3P miaramila Tactical Bags ...
Kitapo mitsangatsangana maivana miaraka amin'ny rakotra orana 25L Outd ...
Kitapo fanatanjahan-tena any ivelany ivelan'ny kitapo 3P Miaramila T ...
Camo Tactical Backpack Miaramila Miantsena Cam ...
Fashion Rucksack Men Women Sport Bag Hiking Cam ...